Ny minisitry ny fizahan-tany any Seychelles dia mizaha trano kely any Bel Ombre any Mahé
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ny minisitry ny fizahan-tany any Seychelles dia mizaha trano kely any Bel Ombre any Mahé
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nitsidika tany Bel Ombre any Mahe ny minisitry ny fizahan-tany Seychelles.
Mpanome trano fizahan-tany kely maro no mampiseho vokatra avo lenta, mijery tsara ny antsipiriany ary miasa amin'ny fenitra haavo 5-kintana, hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany, Andriamatoa Sylvestre Radegonde, ny zoma 26 aogositra 2021, nandritra ny fitsidihan'ny orinasa kely ao Bel Ombre.
Nitsidika trano kely 15 ny Minisitra tamin'ny zoma, nanao fifanakalozan-kevitra tamin'ny tompony / mpitantana ary ny mpiasa ao aminy.
Reny mivantana ny fanamby atrehin'izy ireo ary nanoro hevitra azy ireo ny amin'ny fotoana mety ananany izy ireo.
Ny minisitra Radegonde dia niaraka tamin'ny fitsidihan'ny sekretera talen'ny fizahan-tany, Sherin Francis.
Nanohy ny iraka nampanaovina azy ireo hahatakatra bebe kokoa ny indostrian'ny fizahantany sy ny mpilalao ao aminy, ny zoma lasa teo dia nitsidika orinasa kely 15, nanao fifanakalozan-kevitra tamin'ny tompony / mpitantana ary ny mpiasa ary nandre ny olana natrehin'izy ireo ary nanoro hevitra azy ireo ny fotoana mety ananany . Ny fitsidihana ireo orinasa kely ireo dia tena zava-dehibe satria mila fanohanana bebe kokoa noho ny orinasa lehibe kokoa izy ireo ary mitondra ny volom-borona izay very matetika ao anaty rojo vy lehibe sy trano fandraisam-bahiny, hoy ny minisitra Radegonde.
Ny fandraisam-bahiny kreôla dia toetra sarobidy ary mampiavaka ireo mpisehatra kely kokoa eo amin'ny sehatry ny fizahantany, hoy izy. Nankamamin'i maro izay mitsidika an'i Seychelles, ity dia zavatra tsapan'ny mpitsidika voalohany amin'ny alàlan'ny mpampiantrano azy ireo amin'ny orinasa kely manao fihetsika kely, na ny miarahaba azy ireo zava-pisotro eo an-toerana na ny fikarakarana azy ireo amin'ny sakafo masaka ao an-trano, izay hitan'ny maro amin'izy ireo fa raiki-pitia amin'ny hitan'izy ireo ny tsiro hafakely an'ny nahandro krôola.
Ny Minisitra Radegonde dia niaraka tamin'ny fitsidihany an'i La Maison Hibiscus, ny Cove Holiday Apartment, Beach Cottages, Beach Cove, ny Drake Sea Side Apartment, Surfers Cove, Treasure Cove, Daniella's Bungalow, Casadani, Villa Rousseau, Forest Lodge, Le Chant de Merle , Bamboo River Lodge, The Palm Seychelles ary Marie Laure Suites avy amin'ny Sekretera Principal momba ny fizahantany, Sherin Francis, ary koa ny mpikambana voafidy ao amin'ny Antenimieram-pirenena ho an'ny Bel Ombre, Honorable Sandy Arissol.
Volana be atao ny volana aogositra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa notsidihina, miaraka amin'ny maro no manamarina fa mirongatra ny famandrihana hatramin'ny dingana farany tamin'ny fanokafana ny firenena tamin'ny volana martsa lasa teo.
Raha niresaka momba ny fomba nifanarahan'izy ireo tamin'ny toe-draharaha izy ireo, rehefa nametraka ny rambony ny indostria, dia nasongadin'izy ireo fa nitodika tany amin'ny fizahan-tany anatiny izy ireo izay nahatonga ny varavarana hisokatra.
Miaraka amin'ny fanafoanana ireo mpitsidika iraisam-pirenena lasa matetika kokoa, nilaza ny tompona orinasa fa naka fomba mora azo kokoa izy ireo izay mitondra dividends, ny vahiny sasany manemotra ny fijanonany fa tsy manafoana tanteraka.
Raha maro amin'ireo toeram-ponenana fizahantany kely no mandray vahiny amin'ny tsena loharano mipoitra, dia misy vitsivitsy izay miankina amin'ny nentin-drazana. Nampahatsiahy azy ireo ny minisitra Radegonde fa mila miroso amin'ny tsena misy tratrany toa an'i Eropa Atsinanana sy ny Emirà Arabo Mitambatra izy ireo ary hamerina hijery ny paikadim-barotra mba ho tafavoaka velona, ​​izay azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fitarihan'ny departemantan'ny fizahantany.
Ny tsy fahampian'ny mpiasa marim-pototra dia iray amin'ireo fanamby lehibe ataon'izy ireo, hoy izy ireo, ary nanamafy ny ankamaroan'ny tompona fa miezaka mafy araka izay azony atao izy ireo mba hitazomana ireo mpiasa Seychellois madio. Na dia nahomby aza ny sasany tamin'ity asa ity, dia maro no nilaza fa ny sasany amin'ireo mpiasa eo an-toerana dia tsy natokana ho an'ny indostria ary tsy te-hametraka amin'ny fotoana sy ezaka ilaina. Nasongadin'Andriamatoa Loizeau avy any Casadani fa ny asa any an-toerana dia tsara kokoa hatrany, na izany aza, rehefa esorina amin'ny olona tsy mpiasantsika ireo zaza, ny antitra, ireo tsy afaka miasa ary ireo izay mandà, vitsy ny safidy sisa tavela ary amin'ny fotoana sasany dia tsy maintsy mitady asa any ivelany izy ireo.
Ny fanaovana hetsika bebe kokoa ho an'ny mpizahatany ao anatin'io toerana io ihany koa dia lohahevitra iray niadian-kevitra, maro ireo tompona orinasa mahita ny vahinin'izy ireo mitady zavatra hatao, olana iray izay novalian'ny minisitra Radegonde, ary nanamafy fa misy ny asa atao hanovana izany satria tsy manome fotsiny mpitsidika zavatra tokony hatao nefa koa antony hijanonana lava any amin'ny toerana haleha sy hampitombo ny fandaniana, hitondra fidiram-bola ao amin'ny firenena.
Ny olana hafa noresahina dia ny fikorontanan'ny tabataba, ny loto, ny fako ary ny fihenan'ny fidirana amin'ny morontsiraka noho ny fivoarana sasany.
Na eo aza ireo fanamby ireo dia nanana valiny tsara ny orinasa, miaraka amin'ny tompona maro manamafy fa nisokatra tamin'ny fotoana mety ny firenena, manome azy ireo fotoana hivelomana. Ny fisokafan'ny toerana alohan'ny maro hafa dia nanome azy fifaninanana fifaninanana, hoy ny navalin'i PS Francis, ary ny fepetra malina ao amin'ny firenena dia nanamora kokoa sy nanintona ny olona handeha toy ny fandraisan'ny firenena mpitsidika avy hatrany hatrany Alaska.
Raha nilaza ny heviny momba ireo fitsidihana ireo dia nilaza i Honorable Arissol fa nahita vokatra izy ireo rehefa nifampiraharaha tamina tompon-trano, nahalala bebe kokoa ny toe-javatra misy azy ireo sy ny olana misy ao aminy, izay misy koa ny olana mifandraika amin'ny GOP sy ireo mpiasa tsy azo atokisana. Izy koa dia nifanaiky tamin'i Andriamatoa Rousseau avy ao amin'ny Forest Lodge, izay nilaza fa ny programa fampianarana Seychelles Tourism Academy dia zava-dehibe amin'ny indostria ary tokony ho takatry ny mpianatra fa misy fiainana hotely bebe kokoa izay mitaky ary mitaky fahafoizan-tena ary koa fientanam-po.
Talanjona noho ireo orinasa notsidihin'izy ireo, ny minisitra Radegonde sy PS Francis dia samy naneho hevitra momba ny fomba anehoan'ny sasany amin'ireo orinasa kely vokatra ambony kalitao ireo, amin'ny fijerena akaiky ny antsipirihany sy ny fiasa amin'ny fenitra haavo 5-kintana.
Ny fitsidihana isan-kerinandro dia ampahany amin'ny ezaky ny minisitra Radegonde hanamafisana ny fifandraisany amin'ireo mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana izay hanamora ny asany amin'ny famahana ny olana atrehin'ny indostria eo ambanin'ny portfolio-ny.
Ny mpanjakavavy Elizabeth II dia nandà ny loka Oldie of the Year
Ny fihaonana an-tampony any Barcelona dia manoritra ny ho avin'ny...